Ingabe Izintandokazi Zibala I-Technorati? | Martech Zone
Ingabe Izintandokazi Zibala I-Technorati?
NgoLwesihlanu, Septhemba 8, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Isikhathi sokunye ukuhlolwa bantu! Ngifuna ukubona ukuthi ukungabi nami kuzintandokazi zakho zeTechnorati kukhulisa izinga lebhulogi yami. Nasi isithombe-skrini sezinga lami lamanje, ukuze wazi ukuthi angizami ukudonsa uboya ngamehlo akho:
Uma ungakajoyini, ngincoma kakhulu iTechnorati. Nasi isixhumanisi ongangeza kuzintandokazi zakho:
Nasi isithembiso sami kuwe… Ngizonifaka nonke ezintandokazini zami uma nje sengibona ukuthi ningingezile. Ngesonto elizayo, ngizobheka isikhundla bese ngithumela isikhundla ngemuva kokuthi abanye abantu bangingeze.
Amashidi Esitayela Aqabulayo
Sep 8, 2006 ngo-11: 37 PM
Angicabangi ukuthi bayabala - kungenye nje yezindlela zokukhuthaza ukuvelela kubhulogi, ngicabanga.
(Futhi yebo, ngizithandele!)
Sep 9, 2006 ku-5: 47 AM
Umbono omuhle wokuhlolwa kukaDoug, ukungeze njengentandokazi. Ake sibheke ukuthi kwenza umehluko yini.
Sep 10, 2006 ngo-12: 50 PM
Ngokwazi kwami, akubalwa.
Ngikungeze kuzintandokazi zami, ngoba noma kunjalo ngibhaliswe nge-RSS 🙂
Sep 10, 2006 ngo-8: 43 PM
Ngicabanga ukuthi nina bantu niqinisile. Ngithole izinkomba ezimbalwa kusayithi lami ngakho isikhundla sami sikhuphukile; noma kunjalo, kubonakala sengathi izintandokazi ziyithintile.
Kuyathakazelisa ukuthi kodwa, ngenze omunye wabantu owakhetha njengenye yezintandokazi zami futhi ngikholwa ukuthi kusizile ukukleliswa kwakhe. Kepha ubekwe ebangeni le-900,000+. Ngemuva kokumaka njengentandokazi, wakhuphukela cishe ku-844,000.
Mhlawumbe kusiza kuphela ezingeni lapho ungakhonjiswanga kusuka kwamanye amabhulogi? Hmmm.
Sep 11, 2006 ku-7: 11 AM
Kuyinto enhle kimi ukuthi izintandokazi azibalwa, noma ngabe angikho ndawo ezingeni!
I-BTW, igama lakho elilwa nogaxekile alibonakali ku-IE7. Udinga ngempela ukuyeka ukuyisebenzisa 🙁
Sep 14, 2006 ku-10: 40 AM
I-SEOmoz yenza uvivinyo oluthile ngale migqa:
I-SEOmoz Technorati Ephezulu eyi-100